How to root Huawei c8812 version 4.0.3?????? — MYSTERY ZILLION
June 2012 edited June 2012 in Daily Life
Pls help me to root c8812 version 4.0.3 very urgent bro??????????
MMAS ကတွေ့တဲ့Root လုပ်နည်းပါ။
တကယ်လို့ Firmware ကျသွားရင်ပြန်သွင်းဖို့မူရင်း Firmware ပါ။
vol down နဲ႔ power bottom ကို နိတာ boot screen က မရပဘူးျဖစ္ေနတယ္
သူ့အပေါ်က USB debugging, unknown sources on တာတွေ၊ Fast boot off တာတွေအကုန်ပြီးပြီမလား။
ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပြီး Vol down + Power button ကို၅-၁၀စက္ကန့်လောက်တော့တွဲနှိပ်ထားရတယ်။ Huawei Logo နေရာလေးမှာရပ်နေပြီဆိုရင် fast mood ဝင်ပြီပဲ။ နှိပ်တာတစ်ပြိုင်တည်းမဖြစ်ရင် OS ထဲပြန်ဝင်သွားတက်တယ်။ ပြီးရင်Recovery Super Click ထဲကသူပြောထားတဲ့ bat file ကို run လိုက်ရင် command ပုံစံမျိုးတွေလာပေါ်လိမ့်မယ်။
သူ့ဟာသူ process လုပ်ပြီးရင် success ဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်ဖုန်းပိတ်။ ဒီတစ်ခါ Vol up + Power button ကိုတွဲနှိပ်၊ Recovery mode ထဲကိုဝင်သွားမယ်။ Reboot System Now ကထိပ်ဆုံးမှာပဲထင်တယ်ရှိတယ်။ အဲဒါနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီ။
Unkind ပြောသလို နည်းလမ်းနဲ့ C8812 Android version 4.0.3, Baseband version 2030 တွင် မရနိုင်ပါခင်ဗျာ။
HUAWEI C8812 Android version 4.0.3,Baseband version 2030 Build number C8812V100R001C92B926 ကို ဘယ်လို root လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိပ် ရှင်းပြပေးပါ။ ကူညီပါဗျို့
To root C8812 (4.0.3)